Qorshaha Fahad Yaasiin rabo in uu “ku Boobo” xulista baarlamaanka 2021 & Halis ka jirta | SMC
Home WARARKA MAANTA Qorshaha Fahad Yaasiin rabo in uu “ku Boobo” xulista baarlamaanka 2021 &...
Qorshaha Fahad Yaasiin rabo in uu “ku Boobo” xulista baarlamaanka 2021 & Halis ka jirta
Agaasimaha Hay’adda sirdoonka Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaajir Daahir, ayaa Jimcadii wuxuu Hotel Jazeera ee Muqdisho kula kulmay taageereyaasha Villa Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumada, Mahdi Maxamed Guuleed [Khadar], ayaa goobjoog ka ahaa qadadaas loo sameeyay jamaahiirta dowladda waqtiga kasii dhacayo ee caanka ku ah magaca “Xoogaga Wadaniyiinta”.
Fahad iyo Khadar ayaa dhalinyaradda u sheegay “in la joogo waqtigii ay dalka xukumi lahaayeen, una diyaar-garoobaan dagaal dhinacyo badan oo ay kamid noqonayaan Labada Gole ee baarlamaanka 10aad ee waddanka”.
Sidda qaar kamid ah ka qeybgaleyaasha u dusiyeen GO, Fahad ayaa madasha ka yiri “xoog iyo xeelad ayaan isugu geyn doonaa sidii aan dalkan uga badbaadin lahayn qof walba oo [waddanka] u soo shaqeeyay kahor 2017-kii”.
Wariyihii hore ee telefishinka Qadar laga leeyahay ee Al Jazeera ayaa sidoo kale wuxuu dhalinyarada la wadaagay in ku talagalkooda coddeynta soo aadan uu yahay in ay soo saaraan madaxweyne iyo sharci-dejiyeyaal da’yar ah.
Si qorshahaas u dhaqan-galo, Fahad ayaa kulankaan wuxuu ka caddeeyay in ay qorsheynayaan in ay bedelaan qodobka dastuuriga ah ee xeerinaya in Xildhibaan ama Madaxweyne uusan noqon karin shaqsi ka hooseeya 40-jir.
“Waxaanu u bedelaynaa 25-jir. Hadii 25-jir Xildhibaano lagu noqon karo taasoo ah mas’uuliyad weyn, maxaa diidayo in 25-jir madaxweyne lagu noqon karo,” ayuu ku difaacay doodiisa, sidda kusoo warameen goobjoogeyaasha.
Inkasta oo tiradooda aan wali la xaqiijin, taliyaha hay’adda NISA ayaa dhamaan dhalintii fadhigaas xaadirka ku ahayd u balanqaadey Xildhibaanimo.
“Dhamaantiin waxaa tihiin Xildhibaanadda 2021, Insha Allah; 183 Xildhibaan oo qaranka daacad u ah iyo madaxweyne Farmaajo codka siin doona,” ayuu ku daray, isagoo muujinaya in uu rabo in uu soo laabto madaxweynaha.
Wallow ay calaamad su’aal dul hooganeyso qaabka uu ku dhaqan-gelinayo riyada madaxda muddo xileedkoodu gabaabsiga yahay, waxaa ka muuqaneysa in ay ku talogalkeen in aysan si nabad xilka uga degin taasoo fowdo keeneysa.
Previous articleXasan Kheyre & Farmaajo oo qadka taleefanka kuwada hadlay, Maxay kawada hadleen?
Next articleDhageyso Maamulka Degmada Xudur Oo Sheegay in Adeegyada Bulshada Degmadaasi u baahan yihiin in Waxbadan Laga qabto